पढेको कुराहरु कसरि सजिलैसंग सम्झने ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस्- — Harpraharnews.com
पढेको कुराहरु कसरि सजिलैसंग सम्झने ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस्-
६ श्रावण २०७५, आईतवार हरप्रहर न्युज
धेरैलाई पढेको कुरा सम्झना निक्कै नै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले पढेको कुराहरु कसरि सजिलै संग सम्झने र परीक्षाको लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने बारे केहि सजिलो तरिकाहरुको बारेमा जानिराख्नुहोस् ।
चट्याङ परिरहेको अवस्थामा कसरी अपनाउने सर्तकता ? जानी राख्नुहोस्-
सुत्ने र उठ्नेको पनि समय र तरिका छ ! यो कुरा थाहा छैन भने जानी राखौ-